वामदेवलाई पट्यारलाग्दो प्रतीक्षा
२८ आश्विन २०७७, बुधबार ०४:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं
काठमाडौं । पार्टीभित्रको किचलो र संवैधानिक अवरोधका कारण कार्यकारी प्रमुख बन्ने महŒवाकांक्षाबाट पछि हट्दै अन्ततः मन्त्री बन्न तयार बनेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका लागि अदालती प्रक्रिया पट्याएरलाग्दो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै दसैंसम्म होम आईसोलेसनमा बसेका कारण गौतमको थप सुनुवाइ दसैंपछि कहिले हुने हो अझै टुंगो लागिसकेको छैन ।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कोटामा राष्ट्रियसभामा मनोनीत भएपछि निर्णय बदरको माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हालेको रिटमा ७ असोजमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि थप जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पेसी चढाएर सर्वोच्चले दुईपटक सुनुवाइ गरे पनि कोभिड–१९ प्रभावका कारण न्यायाधीशहरू अदालतै गएका छैनन् । १४ असोजमा गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशबारे पहिलो छलफल भएको थियो ।
पार्टीको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवालयबाट उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाउनुपर्ने मत केन्द्रीय सचिवालयमा प्रभावी छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत बहुमत सचिवालयका नेताहरू दुवैलाई सरकारमा पठाउनुपर्नेमा छन् । सरकारले आधा कार्यकाल गुजारिसकेको र अबका दिनमा चुनावी घोषणापत्रअनुरूप कार्यसम्पादन तीव्र ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती नेकपासामु रहेको निष्कर्ष २६ भदौमा सम्पन्न स्थायी समितिले निकालेको थियो । त्यही निष्कर्षका आधारमा सरकार पुनर्गठनबारे ओली र प्रचण्डबीच नियमितजस्तै छलफल हुँदै आए पनि सर्वोच्च अदालतले गौतमबारे निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा पुनर्गठनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अदालतको ढिलाइ रक्षाकवचजस्तो देखापरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका गौतमले १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको शपथ खाएका थिए । शपथलगत्तै उनले राष्ट्रियसभाको गरिमा बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन , उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल जगेडामा
नेतृत्वकोे जडताले बजाएको अस्थिरताको घन्टी
चीनले किन चाहन्छ नेपालको समृद्धि ?
पुस्तकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङ फिङ् को नेपाल भ्रमण
नापीका हाकिम रेग्मीले कसरी जोडे घरघडेरी ?
सञ्चार मन्त्रालयमा प्रचण्डको जोडबल
‘दुई तिहाइ’ले यस्तो अस्तव्यस्तता कहिलेसम्म हेरिरहने ?
पार्टी र सरकारबीच संगति हुनुपर्दैन ?
‘राजदूत’ का चार नाम मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता
कम्युनिष्टबाट लखेटिएका खतिवडा कसरी भए कम्युनिष्टका यति प्रिय ?
रोकियो नेकपा महाधिवेशनको कार्ययोजना
सरकारी जग्गामा मेडिसिटी अस्पताल : नापीका हाकिमहरूको दुहुनो गाई